Indlu yaselwandle yabucala - I-Airbnb
Indlu yaselwandle yabucala
Grenadines, St. Vincent & Grenadines
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguAntonio
I-Tenuta Chatham Bay ikwindawo engazange ichukunyiswe ye-Chatham, kwiSiqithi seManyano. Ihotele inechibi langaphandle elingenasiphelo unyaka wonke kunye nedekhi yelanga zombini ngaphakathi kufutshane nolwandle lwethu olunesanti emhlophe. Iindwendwe zingonwabela isidlo esimnandi kwindawo yethu yokutyela ngelixa zijonge ukutshona kwelanga okuhle okanye zonwabele esinye seziselo zethu ezininzi zetropikhi. Ndwendwela indawo yethu yokugcina iwayini kwaye ukhethe kukhetho lwevumba lethu elimnandi lewayini. Zonke iindlwana zethu zinendawo yokuhlala yabucala ejonge echibini okanye elwandle
Indawo yokuhlala yaseTenuta Chatham Bay inobuhle kwaye iphangalele isitayile seCaribbean izindlu zamaplanga ezijonge kuLwandle lweCaribbean. Indawo ekhethekileyo enombono wepanorama ophefumlayo. Yonke i-cottage inebhedi enkulu yenkosi kunye negumbi lokuhlambela le-en-suite. I-Chatham bay inika undwendwe lwalo iphuli entle yokuqubha kunye nolwandle lwabucala ukuqinisekisa ubumfihlo kunye nokuphumla okungapheliyo.
ITenuta Chatham Bay ikwindawo efihlakeleyo yeUnion Island. Ilungele ikhefu lokuphumla okanye ukubaleka. Nangona kunjalo, kukho izinto ezininzi ezinomtsalane kunye nezinto ezenziwayo kwimizuzu nje embalwa yokukhwela isikhephe ukusuka kwindawo entle nedumileyo engangcolisekanga yeTobago Cays (indawo ekhuselweyo yelifa le-UNESCO). ITobago Cays yaziwa ngamanzi ayo amahle acwengileyo kwaye yeyona ndawo ifanelekileyo yokuntywila kunye nokuqubha kunye nofudo. Zonke iziqithi zaseGrenadines zikufuphi neTenuta Chatham Bay. Unokuthatha uhambo olufutshane lokukhwela isikhephe ukuhamba ngeendlela zendalo zaseMayreau kunye neelwandle ezintle okanye undwendwele iSiqithi esidumileyo saseMustique nokunye okuninzi. IGrenadines yeyona ndawo ifanelekileyo ukuba kuyo! I-Tenuta Chatham Bay inokuninzi okuza kufunyanwa kule gem ifihliweyo. Ukuba ujonge umxube ogqibeleleyo wokuphumla kunye ne-adventure, yenza iTenuta Chatham Bay ibe likhaya lakho!
Amalungu eqela lethu kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide ayafumaneka ukuze akuncede 24/7. Andikho kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide kodwa ndiyafumaneka ukukunceda nge-imeyile kunye nesicatshulwa.